I-Barnstable Co. Igubha Iminyaka Engu-25 Yokudonsa - Ellicott Dredges
I-Barnstable Co. Igubha Iminyaka Engu-25 Yokudonsa
Uhlelo lweBarnstable County, Massachusetts, lokudonsa lusanda kugubha iminyaka engama-25 lwasungulwa. Isifunda, esiphethe futhi esisebenza nge-Ellicott® brand cutter suction dredges, sisuse izinto ezicishe zibe yizigidi ezi-2.4 zama-cubic yards ngesikhathi samaphrojekthi angaphezu kuka-300 wokudonsa.
Ingxenye yesine yekhulu leminyaka, lolu hlelo lugcine izindlela zamanzi ukuya nokubuya ethekwini kulula ukuhamba kuzo emikhunjini yokudoba, kanti u-95% wezinto ezigugulekile zisiza ukubuyisela amabhishi azungeze inhlonhlo.
Ngonyaka odlule kube yiwona ophumelele kakhulu kuze kube manje, njengoba cishe ama-cubic yards angu-150,000 asusiwe kumaphrojekthi e-Barnstable, Yarmouth, Falmouth, Bourne, Provincetown, Truro, Dennis, Mashpee, Chatham, nase-Harwich. UTed Keon, ongumqondisi wedolobha laseChatham ophethe i-Coastal Resources, uthe imiphakathi yasolwandle ithembele emigwaqweni ephephile nethembekile.
"Imikhumbi edobayo yase-Chatham iyingxenye ebalulekile emnothweni wedolobha nakuso sonke isifunda," kusho u-Ted Keon, umqondisi wezinsiza ezisogwini edolobheni lase-Chatham. "Ukusekela amaphrojekthi okwehlisa kunembuyiselo ebalulekile kwezomnotho."
I-Dredge “SAND SHIFTER” ku-Anti Lydia's Cove, e-Chatham. Ken Cirillo
Ngenkathi lolu hlelo lwethulwa eminyakeni engama-25 eyedlule, umsebenzi wokuqala we-Codfish - i-dredge yasekuqaleni yomphakathi - wawuseTruro. I-Codfish ibuya cishe minyaka yonke ukuze igcine isiteshi sivuliwe. Ngaphezu kwe-Codfish, manje esetshenziswa njenge-booster, isifunda siphethe iSand Shifter kanye ne-Codfish II, eyathengwa ngo-2019.
Ucwaningo olwenziwa yi-Massachusetts Division of Marine Fisheries, i-Fishermen's Alliance, kanye ne-UMass Boston's Urban Harbors Institute, lubonise ukuthi ukudonsa amanzi kuyinto ekhathaza kakhulu cishe kuwo wonke amachweba esifundazweni.
"Umsebenzi we-county dredge ubaluleke njengokugcina imigwaqo yethu nothelawayeka," kusho uSeth Rolbein, obehola umzamo wechweba le-Fishermen's Alliance. "Impilo yezomnotho waseKapa incike ekubeni nezindlela ezithembekile zolwandle."